ကယန်းအလှ(Kayan Beauties) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributors » ကယန်းအလှ(Kayan Beauties)
Posted by ayeyarwaddy-tun on Mar 25, 2013 in Contributors, Copy/Paste | 14 comments
ကဲ.. သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဧရာဝတီထွန်းက ကယန်းလူမျိုးဆိုတော့ ဒီတစ်ခေါက်ပို့စ်ကို ကယန်းအကြောင်းနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
ကယန်းဆိုတာက သူငယ်ချင်းတို့ပဒေါင်လို့ သိထားတဲ့လူမျိုးပါ …. ပဒေါင်ဆိုတာကအရပ်ခေါ် အသုံးအနှုံးဖြစ်လို့ ကယန်းဆိုတာကို မြန်မာပြည်ကလူတစ်ချို့ကမသိသေးတာပါ….
အခုဒီပို့စ်တင်ရခြင်း အဓိကအကြောင်းအရင်းကတော့ အာစီယံ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ကယန်းအလှ(Kayan Beuties) ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးနှင့် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သူငယ်ချင်းအားလုံးကို အသိပေးချင်ယုံဖြစ်ပါတယ်ရှင်…
ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ဒါရိုက်တာ အောင်ကိုလတ်က နိုင်ငံတကာအဆင့်အတန်းဝင်အောင် ငွေကြေးအမြောက်အများ အကုန်အကျခံကာ ရိုက်ကူးထားကြောင်း နဲ့ သဘာဝအရပ်သူ ကယန်းလူမျိုးအစစ် သရုပ်ဆောင်များကိုသာ အသုံးပြုပြီး ကယန်းလူမျိုးများရဲ့ ဓလေ့တွေကို ရိုက်ကူးထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်..
အစမ်းသဘောအနေနဲ့တော့ youtube မှာ Kayan Beauties ဆိုပြီး ထွေလာလေးတော့ကြည့်လို့ရနေပါပြီ
ဇာတ်လမ်းအစအဆုံးကိုတော့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးထွက်ပြီးမှပဲ ကြည့်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်…
ကဲ… သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဒီတစ်ပါတ်တော့ ကယန်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာရယ် ကယန်းအလှ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအကြောင်းရယ်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်
နောက်တစ်ပါမှာတော့ ဧရာဝတီက ကယန်းလူမျိုးအကြောင်းနဲ့ ဓလေ့အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြချင်ပါသေးတယ်….
ayeyarwaddy tun has written5post in this Website..
View all posts by ayeyarwaddy-tun →
အဲ့ဒီရုပ်ရှင်အကြောင်း ဒါရိုက်တာကြီးဆီက ကြားဖူးခဲ့တာ ၁၀နှစ်တောင်မကတော့ဘူးပဲ..
ကြားထဲမှာ ပရိုဂျူဆာ အပြောင်းအလဲ နဲ့ အခြားအဖုအထစ်လေးတွေလည်း
ကြားခဲ့ရဖူးသေးတယ်.. သွေး ရုပ်ရှင်လိုမျိုး နောက်ဆုံးမှာ ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့
ဇွဲ ကိုလည်း လေးလေးစားစား ခံစားမိပါကြောင်း…။ အားပေးသွားမယ် ဆိုတာ
ayeyarwaddy tun says:
ဟုတ်ကဲ့ ဒါရိုက်တာကိုယ်တိုင်က ဒီဇာတ်ကားရိုက်ဖို့ကိုစိတ်ကူးခဲ့တာ ၁၅ လောက်ရှိပြီလို့သိခဲ့ရပါတယ်
အပေါ်က အင်္ကျီ အဖြူလေးနဲ့ အလှလေးကို အနော် လည်း အားပေးသွားပါကြောင်း၊။
“နောက်တစ်ပါမှာတော့ ဧရာဝတီက ကယန်းလူမျိုးအကြောင်းနဲ့ ဓလေ့အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြချင်ပါသေးတယ်….”
ပဒေါင်လူမျိုးတွေကို ထိုင်းက ခေါ်ပြီး လုပ်စားနေတာ သိကတည်းက ဒီလို ဖြစ်စေချင်နေတာ..
ယူကျုက ထွေလာလေး သွားကြည့်လိုက်အုံးမယ်
ဒီကားကို လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးလလောက်က အစမ်းပြတော့ သွားကြည့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကားလေးက ရိုက်ထားတာရော အသံစနစ်ပါ အရင်မြန်မာကားတွေထက်စာရင် ကောင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။..။ ပဒေါင်လို့ အများသိကြတဲ့ ကယန်းလူမျိုးတွေအကြောင်းလေးပါ။ အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် မြို့ထဲကိုထွက်လာတဲ့ ကယန်းသမီးပျိုလေးတစ်စုကို လူကုန်ကူးသူတွေ ကဖမ်းစီးထားတဲ့အကြောင်းရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပါ။ …..ရှုခင်းတွေရော သူတို့ ဓလေ့လေးတွေအကြောင်းတင်ပြထားတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ အချို့ဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံက သူတို့ဆီက အမျိုးသမီးတွေကို လစာလိုလို အငှားလိုလိုခေါ်သွားပြီး ဟိုမှာ လူတိရိစ္ဆာန်ရုံလိုလိုလုပ်စားပြပြီး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကို ဆွဲဆောင်နေတာတွေရှိတယ်။
ဒီကြေးကွင်းကြီးတွေနဲ့ ဘယ်လိုများနေကြလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
အဲ့လူမျိုးတွေ အကြောင်း စသိတတ်ကာစ အရွယ်ကတဲက စဉ်းစားမိခဲ့တာ တစ်ခုရှိတယ်
သူရို့ တွေ ချောင်းဆိုးရင် ဘယ်လိုများ နေမှာပါလိမ့်လို့ 
ကြေးကွင်းတွေ စွပ်ရတဲ့ သမိုင်းကိုတော့ လူထုဦးလှက ကျားကိုက်ခြင်းမှ ကင်းဝေအောင်လို့ ပါတဲ့
ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ ကယန်း မိန်းကလေးတွေ လည်ပင်းမှာ အဲလိုအစွပ် မခံ သင့်တော့ဘူး ထင်ရဲ့။
ကယန်းမလေးတွေ တကယ်ချောတာ ပါလား။
တလောကတင်.. ထိုင်းကပြန်လာတဲ့အသိတယောက်.. တာချီလိတ်ဖက်သွားပြီး.. ယိုးဒယားပြည်ထဲက.. ကယန်းတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်လာတာ.. ပြသေးတယ်..
အဲဒီကြေးကွင်းတွေကို.. တိုးရစ်တွေစွပ်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရအောင် လုပ်ထားသေးတာမြင်ရတယ်…
ကိုအောင်ကိုလတ်ကြီး.. အဲဒါလုပ်နေတာကြာလှပေါ့..။ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တင်ဖို့တောင် တောင်းဖူးသေးမှတ်တယ်..။
အဆင်ပြေရင်.. ယူအက်စ်မှာပြဖို့.. ထပ်.. တောင်းကြည့်ဦးမှ..။
နာဂနှစ်ကူးပွဲ.. ဂျပန်တွေနဲ့ ဒေါ့ကျုမန်ထရီရိုက်တော့.. ဂျပန်ဒါရိုက်တာက.. နာဂမိန်းကလေးတွေ.. ဂျပန်မင်းသမီးတွေလိုလှနေကြောင်း.. ပြောဖူးတာသတိရမိတယ်..
သူ့မှာ.. ဗီဒီယိုပြပြပြီး. လိုက်ပြောနေတာလေ. :harr:
“အလှမျိုးဟေ့.. ဒို့ဘားမန်င်း.. “
အားပါးပါးစ် ကယန်းမ လှမှလှ… ဧရာဝတီထွန်းလေးလည်း လှမှာပဲ… ဦးကြောင်ကြီး တော်ကောက်တော်မူမည်….။
ကြေးမုံဂျီး.. စိတ်အဆိုးနဲ့.. ပျင်းနေမှာစိုးလို့ ခြစ်ညီမတယောက် အဖော်ရှာပေးတာ.. ကျေးဇူးတင်.. :harr:
အဲဒြိေ့းကွင်းတွေက တစ်နှစ်ကို တစ်ကွင်း စွပ်ရတာဆို ကြေးကွင်းအရည်အတွက်ကိုကြည့်ရုံနဲ့ သူ့အသက်ကို သိရတယ်ဆို အဲဒိလိုငယ်ငယ်က ကြားဖူးတာ မဟုတ်ဘူးလား ရှင်းပြပေးဦးနော်
မနှစ်က ဦးအောင်ကိုလတ်နဲ့ ခဏတွေ့တုံး ဒီကားအကြောင်းမေးကြည့်တော့
သူ့ရှိသမျှကို ပုံအောပြီး လုပ်ထည့်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။
လေနဲ့အော်နေတဲ့ကောင်တွေနဲ့ယှဉ်ကြည့်တော့ ပိုပို လေးစားမိပါ၏။